Contributor, Columnist » အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါတတ်ကျွမ်းလိုသော် – ပါမောက္ခမျိုးကျော်မြင့်	3
အရင်လက Nouns လေးတွေအကြောင်း အတော်အတန်ပြည့်စုံအောင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ Nouns တွေကို လေ့လာတဲ့အခါ သဒ္ဒါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို မှတ်သားနေရုံနဲ့ မပြီးသေးပါ။ အချို့နေရာများ၌ ဝေါဟာရလေးတွေကို အလွတ် ကျက်မှတ်ထားပြီး အခွင့်ကြုံသလိုသုံးသွားဖို့လိုပါတယ်။ ဆိုကြပါစို့ cat, dog, tiger စသည့် words လေးတွေကို လူတိုင်းသိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအကောင်ပေါက်စလေးတွေကို ဘယ်လိုခေါ်သလဲဆိုတာ လူတိုင်းမသိကြပါ။ မြန်မာလိုကတော့ ရှင်းပါတယ်။(ပေါက်စ) တလုံးတတ်ထားရင်ပြီးပြီပေါ့။ ကျားပေါက်စလေး၊ ကြောင်ပေါက်စလေးပေါ့။ အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ မသိသေးရင်ကျက် မှတ်ထားဖို့ကိုလိုပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ –
အုပ်စုလိုက်နေကြတာကို မြန်မာလိုက ရှင်းတယ်။ ကျားအုပ်၊ နွားအုပ်။ အဲ လူတောင် လူတအုပ်လို့ပြောလို့ရတာဘဲ။ အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ အလွတ်မကျက်လို့ကိုမရပါ။
ဒီနေရာမှာ သူငယ်ချင်းတွေကိုယ့်ကို အထင်ကြီးအောင်
Why are fish smarter than other animals ? လို့မေးကြည့်လိုက်ပါ။
ဘယ်သူမှမဖြေနိုင်ဘူးဆိုရင် Fish are smarter than other animals because they attend school all the time. လို့ပြောပြလိုက်ပါ။ ဟုတ်တယ်လေ။ ငါးအုပ်ကြီးကို A school of fish လို့သုံးကြတာကိုး။
Nouns တွေအကြောင်းပြောကြမယ်ဆိုရင် a, an, the ဆိုတဲ့ articles လေးတွေအကြောင်း မပြောလို့မရပါဘူး။ ဒီ articles လေးတွေဟာ သိပ်ကိုအရေးပါသလို သိပ်ကို ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ တို့မြန်မာတွေက ” စာအုပ်၊ ကုလားထိုင်၊ အိမ် ” စသဖြင့်ပြောလေ့ရှိတော့ အင်္ဂလိပ်လိုလဲ Book, chair, house စသဖြင့်သုံးတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အင်္ဂလိပ်စကားမှာ book လို့သုံးတယ်ကို မရှိပါဘူး။ အမြဲတမ်းလိုလိုabook လို့သာ သုံးပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားမှာ Singular နဲ့ Plural က သိပ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အတွက် Singular count nouns မှန်ရင် a, an တို့နဲ့တွဲပီး သုံကိုသုံးရပါတယ်။ a, an မပါရင်လုံးဝမှားနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် အကျင့်ရအောင် အမြဲတမ်းabook,achair စသဖြင့်သုံးကြ ပါ။ A နှင့် An ဘာကွာခြားသလဲဆိုတဲ့နေရာမှာ အများစုက a,e,i,o,uကို an နဲ့သုံးဖို့ မှတ်သားထားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ တစ်ခါတစ်လေမှန်ပေမယ့်တစ်ခါတစ်လေမှားကြပြန်ရော။
ဥပမာ – A honest man လို့ရေးမိရင် မှာသွားပြန်ရော။ နောက်တစ်ခါaEuropean လို့ရေးမိရင်လဲမှားပြန်ရော။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုမှားကြတာလဲဆိုရင် အမှတ်မှားနေတာကိုးး။ လူအများစုက a, e, i, o, u ဆိုတာကို letters လို့အမှတ်မှားနေတယ်။ တကယ်တော့ a, e, i, o, u ဆိုတာ letters တွေကို မဆိုလိုပါ။ အသံထွက်ကိုဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ a, e, i, o, u အစား “အယ်၊ အယ်၊ အစ်၊ အို၊ အူး ” လို့မှတ်သင့်ပါတယ်။ An honest man ဆိုတဲ့စကားစုမှာ Honest ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို Onest လို့ O သံနဲ့အသံထွက်သည့်အတွက် an နဲ့သုံးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူ European ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရမှာလဲ you သံထွက်တဲ့အထွက်aနဲ့တွဲပြီးသုံးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ လောလောဆယ် articles နဲ့ပတ်သက်လို့ (၂)ချက်မှတ်သားထားကြပါ။ ပထမဆုံးက တော့ singular count nouns မှန်ရင် (သို့) မပါဘဲနဲ့ရေးလို့ပြောလို့မရပါ။ A (သို့) An ကိုသုံးကိုသုံးရမယ်ပေ့ါ။ ဒုတိယအနေနဲ့ ဒီ A, An တို့ကို Plural Nouns တွေနဲ့ မသုံးမိဖို့အထူးအရေးကြီးပါတယ်။ A boys, A girls စသဖြင့်သုံးမိရင် သိပ်ကိုအကြည့်ရဆိုး ပါတယ်။ A, An တို့ဟာ တစ်ဂဏန်းကို ကိုယ်စားပြုတယ်ဆိုတာ မမေ့ကြနဲ့။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ A, An တို့ကို Non-count nouns လေးတွေနဲ့သုံးလို့မရတာကို မှတ်သားထားဖို့လိုပါတယ်။
a heath,asugar စသဖြင့် သုံး၍မရပါ။ non-count nouns များကို ဒီအတိုင်းဘဲ သုံးစွဲလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ- ” Health is more important than wealth ”
” Life isacompetition ” စသဖြင့် a, an မပါဘဲသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ a, an တို့လိုဘဲ nouns လေးတွေနဲ့တွဲပြီး သုံးလေ့ရှိတဲ့ few, little, many, much, some တို့ကို လေ့လာကြအုံးစို့….
မြန်မာလိုအများကိုပြတဲ့အခါ many, much ကိုသုံးလေ့ရှိပါတယ်။ much ကို non-count nouns များနဲ့သုံးပြီး many ကို count nouns များနဲ့သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ- ” Many students showed up for the class ” ” Too much sugar is not good for you ” စသဖြင့်ပေါ့လေ။ ဒီတော့တစ်ချို့က Noun တစ်ခုကို count nouns လား non-count nouns လားမသိတော့ ဘာသုံးရမှန်းမသိတော့ဘူး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်ကျမသွားပါနဲ့။ ရေထဲခုန်ချဖို့မစဉ်းစားပါနဲ့။ တစ်ကယ်တော့ count nouns လား non-count nouns လား မသေချာရင် A lot of နဲ့တွဲပေးလိုက်ယုံပါဘဲ။alot of ကို count nouns ရော non-count nouns ပါသုံးလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ- ” A lot of sugar is not good for you ” ” A lot of students showed up for the class ” A lot of လိုပဲ some ကိုလဲ non-count nouns ရော count nouns နဲ့ပါ တွဲပီးသုံးလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ- Some student are here. Give me some water. မြန်မာလိုအနည်းငယ်နဲ့ အဓိပ္ပာယ်တူတဲ့ စကားစုလေးတွေကတော့ few,afew, little,alittle တို့ဖြစ်ပါတယ်။
few,afew ကို count nouns လေးတွေနဲ့သုံးကြပြီး little,alittle လေးတွေကို non-count nouns လေးတွေနဲ့သုံးကြပါတယ်။ ဥပမာ- ” He has few friends ” ” He hasafew friends” “She has little money” She hasalittle money ” ဒီနေရာမှာ little,alittle နဲ့ few,afew ရဲ့ကွဲပြားခြားနားပုံဟာ အထူးမှတ်သားစရာပါ။
နားလည်ဖို့လဲ အနည်းငယ်ခက်ခဲတဲ့အတွက် ကြိုးစားပြီးရှင်းပြပါမယ်။ အချိန်နည်းနည်းလေးပေးပြီး ဖတ်ကြပါလို့ တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။ few,afew ကို count nouns လေးတွေနဲ့သုံးတယ်။ little,alittle ကို non-count nouns လေး တွေနဲ့သုံးတယ်ဆိုတာကတော့မှတ်ရလွယ်ပါတယ်။afew,alittle ဆိုတာ မြန်မာလို ” နည်းတော့နည်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်သုံးလို့ရသေးတယ်ပေါ့ ”
ပထမဝါကျမှာ ” ပန်းသီးအနည်းငယ်ဘဲကျန်တော့ပေမယ့်၊ စားလို့တော့ရသေးတယ် ”
ဆိုတာကိုသတိပြုပါ။ အလားတူနောက်ဝါကျမှာ ” ပိုက်ဆံအနည်းငယ်သာရှိပေမယ့် စက်ဘီးတစ်စီးတော့ ဝယ်လိုရသေးတယ်နော် ” few နဲ့ little ဆိုတာကတော့ နည်းလွန်းလို့ ဘာမှလုပ်လို့ကိုမရဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်။ ဥပမာ-
ပထမဝါကျမှာ ” သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်မျှမရှိလို့ မွေးနေ့ပါတီမကျင်းပရဘူးပေါ့” ။
အလားတူ ဒုတိယဝါကျမှာ ” ပိုက်ဆံနည်းလွန်းလို့ သောက်ချင်တဲ့ coke လေးတောင်မဝယ်နိုင်ဘူးပေါ့”။ စာဖတ်သူအားလုံး A lot of moneyနှင့်A lot of knowledge ရရှိနိုင်ကြဖို့ ဆုတောင်းပေးရင်းနားပါအုံးမယ်…..။
မှတ်ချက်။ ။ မြန်မာ့ဂဇက် ဇွန်လ ၂၀၁၆ ထုတ်တွင်ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြပြီးဖြစ်သည်။
ဂျစ်စိန် says: အူးလေး
မန်းကီးပေါက်စန ကို ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲ
Thint Aye Yeik says: A lot of moneyနှင့်A lot of knowledge ရရှိနိုင်ကြဖို့ ဆုတောင်းပေးတယ်… တဲ့…
ဆုမွန်စကားလက်ဆောင်တွေထဲမှာ…အကောင်းဆုံးပဲ…လို့…ထင့်…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4021
manawphyulay says: A lot of reading now…. :P